November 29, 2020 - Babal Khabar
Nov292020 by बबाल खबरNo Comments
एजेन्सी– कुकुर घरपालुवा जनावर हो । मालिकको रक्षा गर्ने भएकाले कुकुर घरमा पालिन्छ । कुकुर प्रेमीहरु धेरै हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा कुकुरको औधी हेरचाह गरिन्छ । कुकुरका विषयमा धेरै कुराहरु सबैलाई जानकारी भए पनि कुकुरको मुल्य सुनेर आश्चार्य लाग्न सक्ला । चीनमा तिब्बतियन मास्टिफ प्रजातिको एउटा कुकुर करिब २ मिलियन डलर (२२ करोड नेपाली रुपियाँमा) बेचिएको छ । भिडियो हेर्नको लागी तल थिच्नुहोला । प्रपर्टी डेवलोपर नाम गरेका एक ५६ वर्षीय व्यक्तिले २२ करोड तिरेर एक वर्ष भएको सुनौलो रंगको तिब्तयन मास्टिफ खरिद गरेका हुन् । शुद्ध प्रजातिका तिब्तयन मास्टिफ विरलै पाइने हुँदा महँगो हुने गरेको यी कुकुरका ब्रिदर जहाज जेनग्युन नामका व्यक्तिले अर्जो रातो रंगको मास्टिफलाई ९६८५०० डलर (११ करोड नेपाली रुपैयाँ) मा बेचेका छन् । ‘मिड.डे.डटकम’का अनुसार यो विश्वको महंगो कुकुर हो । यति महंगो
एजेन्सी – भनिन्छ, महिलाहरु रहस्यका पर्याय हुन् । प्रायः महिलाको जीवनमा कैयन रहस्य र राज हुन्छन्, तर त्यसबारे उनीहरुले कहिल्यै मुख खोल्दैनन् । सोशल मिडियामार्फत हालै गरिएको एक सर्भेमा महिलाहरुसँग सोधिएको थियो, ‘तपाईं के कुरा हाम्रो श्रीमान वा प्रेमीसँग कहिल्यै बताउनु हुन्न ?’ रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै थाहा भयो कि, के कुरा हो त्यस्तो जुन महिलाहरुले कहिल्यै भन्दैनन् । पूरानो अफेयरबारे लाग्ला तपाईंको जीवनसाथी वा प्रेमिकाको सबैभन्दा आनन्ददायी अनुभव तपाईंसँगै भएको हो । तर, तपाईं गलत हुन सक्नुहुन्छ । किन कि तपाईंलाई के थाहा, न उनले केही कुरा छुपाएको पो छिन् कि ! ज्यादातर महिलाहरु आफ्नो पूरानो अफेयरबारे हालको प्रेमी वा श्रीमानलाई केही कुरा बताउँदैनन् । यसकारण कि उनलाई कसैले नराम्रो नबुझुन्। दोस्रो कारण ज्यादा व्यवहारिक छ । महिलाहरु यस्तो कुरा यसकारण छुपाउँछन्, ता कि उनको हालको सम्बन्ध
अहिलेको समयमा हरेक आमाबाबुहरु आफ्ना सन्तानका लागि पर्याप्त समय दिदैनन् । आफ्नो काममा व्यस्त रहने आमा बाबुले सन्तानलाई समय दिन सकिरहका हुँदैनन् । यो बीचमा भारतको उत्तर प्रदेशको बरेली जिल्लामा एउटा अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार एक बच्चाले खेल्दा खेल्दै जिउँदो स'र्प निलेका छन् । भिडियोको लागी तल थीच्नुहोला । भारतको चर्चित अखबार टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणमा आएको समाचार अनुसार बच्चाकी आमाले आफ्नो छोराको मुखभित्र केही वस्तु देखेपछि हतपत हेरिन् । जब उनले त्यो वस्तुलाई बाहिर निकालिन् तब उक्त वस्तु सर्प बच्चा भएको थाहा पाइन् । उनले छोरालाई तत्काल अस्प'ताल पुर्याइन् । बच्चाका पिता धर्मपाल एक किसान हुन् । उनी आफ्ना एक वर्षका छोरा देभेन्द्र र ६ इन्च लामो मरेको सर्पको बच्चा लिएर अस्प'ताल पुगे । धर्मपालले इमर्जेन्सी स्वास्थ्य अधिकारी डा. हरिश चन्द्रलाई उ
काठमाडौँ – शुक्रबार भारतीय सेनामा कार्यरत एक नेपालीको निध'न भएको छ। शुक्रबार बिहान भएको आ’तंककारी ह’मलामा भारतीय सेनामा कार्यरत एक नेपालीको नि'धन भएको हो। निधन हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगर पालिका वडा नं. ९ बेलुवाका ३० वर्षीय प्रेम केसी रहेका छन्। जम्मु कास्मिरमा कार्यरत केसी शुक्रबार बिहान ५ बजे आसपासको समयमा ह’मलामा परेको र अ'स्पताल लैजानेक्रममा नि'धन भएको बताइएको छ। बिहान ९ बजेतिर भारतीय सेनाले घर परिवारलाई फोन गरी गो’ली लागेको भनेर खबर दिएको भएपनि प्रेमका साथीहरू संग बुझ्दा नि'धन भइसकेको थाहा भएको परिवार जनले बताएका छन्। शुक्रबार ज्या'न गुमाउने प्रेमका बुवा लालबहादुर केसी पनि रिटायर्ड भारतीय सेना रहेका छन्। निधन भएका प्रेमको श'व' लिन उनी घरबाट हिडिसकेको बताइएको छ। YOU MAY LIKEMgid
चीनका वैज्ञानिकहरुले भारतबाट को'रोना भा इरस विश्वभर फैलिएको बताएका छन्। भारतीय संचार माध्यमहरुका अनुसार चीनले को रोना भाइ रस चीनबाट नभई भारतबाट विश्वभर फैलिएको दावी गरेको हो। चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सका वैज्ञानिकहरूले कोुरोना भाइरस चीनमा भन्दा अगाडी भारतमा फैलिएको र त्यो पछि चीन र विश्वभर फालिएको दावी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यम नव भारत टाइम्सले जनाएको छ। को रोना भाइ रस भारतमा गर्मी मौसममा २०१९ मा फैलिएको चीनका वैज्ञानिकहरूले दावी गरेको नव भारत टाइम्सले समाचारमा उल्लेख गरेको छ। भारतको ख'राब स्वास्थ्य प्रणाली र युवाहरूको कारण को'रोना भा'इरस को'रोना भाइरस सम्पर्क नआएका मानिसमा समेत सरेको चिनियाँ वैज्ञानिकहरु दावी रहेको छ। कोरो'नाको उद्गमस्थल चीनको वुहान शहर बताइएपनि चीनले भने वुहानमा कोरोना भा'इरस अन्यत्रबाट आइपुगेको दावी गर्ने गरेको छ। को'रोना भाइ'रस को सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान
काठमाडौँ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि गम्भी'र नैतिक प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन पेश गर्दै आफ्नै पार्टीको सरकार वि'रुद्ध षड्यन्त्र गर्ने प्रचण्ड माथि गम्भी'र नैतिक प्रश्न उठेको बताएका हुन्। प्रचण्डबाट आफूलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्रममा ठूलो असहयोग भएको ओलीको भनाई छ। प्रचण्डले कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावको भाषा शैली र आरो'पले उनीभित्रको आक्रो'श, आग्रह, घृ'णा र कु'ण्ठा देखाएको ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। यस भन्दा अगाडी अनि प्रचण्डबाट धो'का भइसकेको अवस्थामा समेत आफूले कुनै प्रश्न नगरी सहकार्य गरेको ओलीको भनाई छ। नाकाव'न्दीको समयमा बनेको सरकार
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन चुनौती दिएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रचण्डलाई महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेर विजयी हुन चुनौती दिएका हुन्। ओलीले अलिकति ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत प्रचण्डले गर्न थालेको आरोप लगाएका छन् । “आज तपाईँले अलिकति ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थाल्नुभएको छ, आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरूको भावना होइन, टाउका गन्न थाल्नुभएको छ। कित्ताकाट गर्न थाल्नुभएको छ। सम्झिनुहोस् त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा